"Maanta waxaan aadan jecleyn inaad wax sameyso
Kaliya waxaan argo ku jiifsatay sariirtayda
Ha dareemin aan telefoonka ka dib markii sida, sidaa farriin dooddeeda
'Sababo maanta waxa aan ku dhaartay inaan wax wanaagsan ma samaynayno,
Lyrics Kor waxaa ka Bruno Mars - Maalinta Ninkii caajis ah , kuwaas oo dadka ugu badan rabaan in ay sameeyaan fasax Christmas waxaan u malaynayaa. No ganacsi, waxbarasho lahayn, kaliya woxogaa la cayaarto qoysaska iyo saaxiibada. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay qaar ka mid ah fikradaha hadiyad Christmas ee ragga iyo dumarka. Hubi aan liiska oo aad ka heli doonaa waxyi ka badan.
Part One - Top 5 Christmas Gift Fikradaha Ragga
Part Two - Top 5 Best Christmas Gift Fikradaha Haweenka
Raga, fasaxa Christmas noqon kartaa samada haddii aad ogtahay sida loo soo dhoweyn doonta la hadiyado ku haboon soo socda. Guud ahaan, oo dad sidii video, ciyaarta oo kulan video. Sidaa oo dhan ugu fiican hadiyado Christmas xarun dhexe ee kor ku xusan 3 mawduucyo.
1. Streaming Player sida Chromecast / Apple TV / Roku
Marka yeynan ama xataa u dhimanayaan sariirtay inta lagu jiro Christmas, aad leedahay salool iyo Pepsi gacanta, waxa aad u baahan tahay oo kaliya bidix filim heer sare ah sida taxanaha interstellar ama maraq sida The Aragtida Boom Big. Si kastaba ha ahaatee, ma sahlana si ay u helaan wax walba oo online, laakiin waxa aad u sii qulquli karaan warbaahinta maxaliga ah in TV la hoorto ciyaartoyda sida Chromecast / Apple TV / Roku si ay u ilaalsadaan this. Hel mid ka mid ah saaxiib aad lab, isna wuu idinka mahad doono waayo, laaluushku wanaagsan. Haddii aad rabto in aad daawato qaar ka mid ah filimada Christmas, halkan ka fiiri .
2. Video Games sida Call of Duty: Advanced Dagaalka
Ma jiro nin diidi lahaa oo Sixira kulan video. Waan ogahay qaar ka mid ah guys oo noolaan karaan iyagoo aan dumarka laakiin ma noolaan karaan iyagoo aan kulan video, xitaa hal maalin oo kaliya. Waa maxay sababta? My saaxiib Jim ii sheegay in aad image saaxiibtinimada uu la saaxiibo ciyaarta dhisay online for hore 4 sano aysan heli karin. Waxaad mar dambe ma ay ciyaaraan ciyaaro, waxaad sidoo kale saaxiibada badiyay. Dhammaan walax funny kuwa, kaftanka wasakh yihiin iyaga ka. Taasi waa il farxad. Waxaan ahay gabar, waxaan image ma sheegi karo, laakiin waxaan filayaa inay taasi kiiska la mid ah la anigu ma noolaan karaan iyagoo aan Facebook.
3. Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ama Playstation
Sababta isla fikrad labaad, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ama Playstation waa doorasho hadiyad u fiican. Version ugu dambeeyay waa in ugu fiican. Waxa laga yaabaa in kharash iyo gacmahaaga lugaha, laakiin la yaab leh ugu weyn saaxiibo aad lab keeni kara. Ha iigu sheegi, marna ma isku dayaan in ay ciyaaraan ciyaaraha sida Super Mario ee qolka fadhiga ku Weekend ama fasax qaar ka mid ah sida Christmas. Waxaa laga yaabaa inaad khasaaro fursad weyn ay la joog saaxiibo ama families.Check sida loo preorder Madaxweyne Siilaanyo iyo Playstation halkan .
Wixii guys kuwa aan jeclaan dagaalka iyo garaaca, waxaad ka qaadan kartaa qaar ka mid ah hadiyad tahay sida Sameecadaha, oo iyaga ayaa kaa caawin kara in aad isku dejiso mar walba meel kasta marka fur galay ciyaaryahan music. Qaar ka mid ah alaabtii wanaagsan sida Beats samatabbixin karaa Olimpico audio cajiib ah saaxiibadaa. Fur buugga, saaray headphones, bilaabaan in ay ciyaari Bruno Mars Maalinta caajiskuna, waxa maalin caajis yahay!
Ninkeyga jacaylka kafeega, ayuu yiri shirkadda ugu fiican adduunka si joogto waa Coffee. Heer sare waxaan u shaki, maxaa yeelay, waxaan u akhri warka ku saabsan dhibaatooyinka soo raaca maraq this madow. Si kastaba ha ahaatee, ma iska indho tiri karin Nicmada ka saaxiibo aad lab, oo sidaas daraaddeed, haddii aadan fahmi karaa fikrad fiican Christmas, isku day in aad isaga u siiyaan Nespresso ah.
Marka la barbar dhigo ragga, hadiyadaha loogu tala galay dumarka noqdaan inta badan ka sahlan. Waxaad ku saleeyaan karaa oo kaliya 2 xeerarka: qurux badan iyo jaceyl. Wax kasta oo ka dhigi kartaa iyada dareemaan qurux badan sida bacaha, jewelries, kabaha, cadar, lipsticks yihiin doorasho wanaagsan. Wax soo bandhigaysaa jaceyl noqon kartaa optional. Laakiin iska indha qaar ka mid ah ku celiyaan low-dhamaadka xirfadaha jaceyl isticmaalo sida GUUSHII, macmacaanka, nigis sexy iyo wixii la mid ah. Halkan waa liiska si aad tixraac.
6. Barafuun la Story
Saaxiibo badan oo lab ii sheegay, waxay garanayeen way soo qaado waa in kor wax u eg foox u saaxiib, laakiin kuwaas oo mid ka mid ah waa in si fiican u noqon. My jawaab yahay waxay ku xiran tahay nooca la micno aad rabto in aad abaal marin si. Tusaale ahaan, haddii aad doorato cadar Lancome Magic, waa in aad iyada u sheeg sixir la joogo marka aad ka hor ama sida sixir ayay u muujinaysaa ilaa aad nolosha dadka saboolka ah. Ma heli karaa? Cadarka A sheeko ku haboon, kaamil ah fikrad hadiyad Christmas!
7. Aan Darnayn-raaxo Bag
Gabdhaha ayaa gabdho ah. Waxaa laga yaabaa in aan si ka badan lacag-cibaadada, laakiin wali waxaa jira qaar ka mid ah marka la barbardhigo wasakh ah wax yar u dhaxeeya. Iibso qaar ka mid ah bacaha fudud-raaxo sida tababaraha ama MK aad saaxiib dumar ah oo waxay ka badan ayaa kuu abaalgudi doona ka badan dhunkasho in this Christmas.
Ma doonaysaa in ay iyada u sheeg inaad jeceshahay muddo dheer on this Christmas? Ma ogi oo hadiyad ahaan waa ku haboon? Waxaan aad ugu boorinayna lipstick ah sida Tom Ford la "Spanish Pink" badbaadi lahayd oo aad u. Wax macno ah ma nooca midabka ay tahay, iyada oo gabar, iyadu qeybiso jecel midabka this. Me sidoo kale!
9. muuhiyey Camera
Ma jiraan gabar kasta oo qurux badan kuu ma jeela dhigay sawir maalmahan? Waxaan u maleynayaa jawaabta wanaagsan waa la hubaa in ka badan xun. Sidoo kale waxaan jeclahay muuhiyey, maxaa yeelay, camera dhigay sawir qaar ka mid ah sida Casio TL350 aniga iyo saaxiibaday dumar la yaab ilaa xad. Haddii aadan aqoon u leh camera dhigay sawir ama aad kaliya iyada ku siin karaan iPhone 6 daray ah, taas oo uu leeyahay 8-megapixel camera iSight. Laakiin waxa fiicnaan lahayd haddii aad xaqiijin karaa waxay noqon lahayd gabadha aad maalin maalmaha ama aad waayi doonto ma ahan oo keliya muddo ah xiriirka laakiin $ 399.
10. Wax Karinta
Buugga waxay noqon doorasho ee la soo dhaafay in aan liiska, laakiin ma doorashada ugu xumaa waa. Gabdhaha qaarkood sida muuhiyey, gabdhaha qaar ka mid ah sida walax raaxada, waxaa weli jira qaar ka mid ah gabdhaha jecel karinta. Sidoo kale waxaan jeclahay cunto karinta. Markii aan qabto waqtiga firaaqada ah sida tan Christmas, waxa ay noqon doontaa Waxaan aad ugu faraxsanahay ugu fiican si ay u diyaariyaan casho weyn ee qoysaska oo dhan. Dooro qaar ka mid ah buug karin wanaagsan sida Plenty More, inaad isla markiiba ku raaxaysan karaan delicious Christmas ah!
All oo dhan, nooc aan loo eegayn waxa hadiyad Christmas aad diyaar u ah saaxiibo ama qoys, waa inaad u samaysaa ka qalbigaaga. Waxaad mudan doontaa dhunkasho Mahadiya ama hab. Qaar ka mid ah oo kale oo fikrad lagu guulaystay hadiyad aan u isticmaalo si loo abuuro Christmas Salaan videos markii aan yeedhi saaxiibaday inuu ku biiro xisbigayga Christmas. Haddii aad leedahay sawiro badan, video clips ee telefoonka gacanta, waxaad ka fekeri kartaa hadiyad video ah oo la abuurayo u soo dirto via email, share on Facebook ama gubi in DVD aad. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ka dhigi kara dhici hal-stop. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Video > Top 10 Christmas Gift Fikradaha Helaan Rag iyo Dumar